Ho amin'ny fijerin'ny mpifaninana voatendry amin'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. RayHaber | raillynews
[15 / 01 / 2020] Inona no nitranga tamin'ny Tetikasa Trambus Şanlıurfa? Manambara ny mpiompy Bashkan taloha	63 Sanliurfa
HomeANKAPOBENYJobsHo amin'ny fijerin'ny mpifaninana voatendry amin'ny TCDD Taşımacılık A.Ş.
hisarihana ireo mpifaninana notendrena hiasa tcdd amin'ny lalàna mifehy ny asa sosialy
Ireo antontan-taratasy takiana amin'ireo kandidà izay voatendry am-pahatsorana ho amin'ny toeran'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. ao anatin'ny sehatry ny lalàna momba ny asa sosialy 2828 dia aseho etsy ambany ho fampahalalana anao.
1) Tatitry ny birao momba ny fahasalamana (Tatitra momba ny fahasalamana momba ny hopitaly sy ny hopitaly ofisialin'ny oniversite).
2) Sampana diplaoma 2 Nomerany diplaoma (raha omena ny diplaoma tany am-boalohany, ny fankalazana ny diplaoma dia eken'ny alalàn'ny TCDD Taşımacılık A.Ş.)
3) 2 Taratasy fanalefahana ny laharana XNUMX (Ho an'ireo izay nanao fanompoana miaramila) na Taratasy ara-miaramila (Ireo izay nihemotra) (azo ianteherana avy amin'ny rafitra mifandraika na rafitry ny e-governemanta).
4) Sampana karatra famantarana identité 2 nomerao (Raha atolotra ny karatra ny maha-izy azy voalohany dia ekena ny alàlan'ny TCDD Taşımacılık A.Ş.)
5) 2 Isan'ny antontan-taratasy momba ny valin'ny KPDS / YDS (Ireo manana antontan-taratasy vokarin'ny KPDS / YDS amin'ny ambaratonga ABC dia tokony hitondra taratasy ihany koa satria hisy fiantraikany amin'ny saram-pihariana)
6) 2 Isan'ny fanamarinana momba ny serivisy (ho an'ireo izay niasa teo ambany andrim-panjakana fiarovana ara-tsosialy) (dia azo raisina avy amin'ny andrim-panjakana mifandraika na rafitry ny e-governemanta)
7) Fanambarana adiresy (azo raisina avy amin'ny andrim-panjakana mifandraika na rafitry ny e-governemanta)
8) Saripika Piece 6 (nalaina tamin'ny volana 6 farany)
9) 2 Isan'ny firaketana heloka bevava (azo raisina avy amin'ny andrim-panjakana mifandraika na rafitry ny e-governemanta)
Nanomana ireo antontan-taratasy voalaza etsy ambony momba ny kandidà eo anelanelan'ny 13 Janoary - 31 Janoary 2020 TCDD Transportation Inc. Tale jeneralin'ny departemanta misahana ny harena an-tany (Adiresy: Lalana Hippodrome Distrika Anafartalar No: 3 Station - Altindag / ANKARA) manokana tsy maintsy mihatra.
Ny 31 Janoary Fampiharana natao taorian'ny faran'ny 2020 ora fiasana sy / na amin'ny alàlan'ny lahatsoratra dia tsy ekena.
TCDD Vangölü Ferry Direction ho raisina amin'ny fifantohana ireo mpifaninana Seafarers
TCDD 356 ho an'ny fandraisana mpiasa
Safidin'ny KPSS-2019-2 vokatry ny valin'ny kandidà mipetraka ao amin'ny TCDD Attention